एसपीको निवासमा २ दिन ‘गैरन्यायिक थुना’ ! – ToplineKhabar
January 30, 2017 प्रदीप भट्ट0Comment
माघ १७, २०७३- पर्सा प्रहरीले बाराका एक खाद्यान्न व्यापारीलाई २ दिन गैरन्यायिक नियन्त्रणमा लिएर छाडेको छ । संविधानको धारा २० को उपधारा ३ बमोजिम ‘पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्नेछ । त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएबाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन’ उल्लेख छ ।
← चुनाव मिति घोषणा गर्न मधेसी मोर्चा सहमत, दुईदिनभित्र घोषणा गरिने
जब्बर महिला: जसका विभिन्न राज्यमा दर्जन श्रीमान छन् →
अपहरणको नाटक गर्दै छोरा र श्रीमानसँग फिरौती मागेपछि….
देउवाले बोलाए एकाएक केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक